GTA Sanandreas Superman mod (for pc) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on October 28, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
GTA Sanandreas game ရဲ.နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ GTA Sanandreas Superman mod ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပထမထွက်တဲ့ ဟာထက်ကိုပိုဆော့ကောင်းတယ်။ ထူးခြားချက်က cheat ခိုးစရာမလိုဘဲ ခုန်လိုက်ရင် အမြင့်ကြီးကိုရောက်ရောက်သွားတာပဲ ဟယ်ရီကော်ပတာတို. ကားတွေတို. အကုန်ဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတယ် ။ နောက်ထပ်ထူခြားတာတွေကတော့အများကြီးပဲ ဆော့ကြည့်မှသိမယ်နော် ကျွန်တော်တော့တော်တော်ကြွေသွားပီ။ ဆိုဒ်ကလဲ သိပ်မကြီးဘူး ၁၀၀မီဂါဘိုက်ကျော်လေးတွေကို ၄ ပိုင်းခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
part (1) ——- Download here
part (2) ——- Download here
part (3) ——- Download here
part (4) ——- Download here
← PES 2014 (for pc)
Command & Conquer : Generals Zero Hour (for computer) →
2 thoughts on “GTA Sanandreas Superman mod (for pc)”
Pusu npt says:
အစ်ကိုရေ GTA superman mod မှာ part 3.rar ကလင့်များသေသွားလားမသိဘူးကျွန်တော် down တာ 1.2.4 ပဲဆွဲလို့ရတယ်။ IDM နဲ့ပဲဆွဲတာပါ အဲဒီတစ်ခုဆွဲလိုက်ရင် IDMက error ပြနေတယ် နောက်ထပ် Linkလေး၇ှိရင် ကွှန်တော့်မေးလ်(pusuma2013@gmail.com)ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပို့ပေးလို့ရမလားအားကိုးပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်က GTA ကိုအမြဲအားပေးတာမို့လို့ပါ Thanks